Fanaanad aabaheed la dilay oo dareenkeeda muujisay
Fanaanada Ayaan Warsame Shire Cawaale oo ka hadashay dareenka dilka aabaheed Abwaan Warsame Shire ayaa waxa ay sheegtay inay ka xun tahay dilkaasi oo ay ku tilmaamtay mid ku beeray murugo aan la qiyaasi Karin oo ka goaynin.
runtii waa arxaan laabayaal kuwa dilay aabaheyga koleey waxaa dishay gacan ka xaq daran, waxa uu ahaa Wadani jacel dadka iyo dalka Soomaaliya ayey tiri Ayaan.
Fanaanada ayaa waxa ay intaasi ku dartay in dhowr jeer oo hore loo hanjabay aabaheeda balse uusan u dheg dhigi jirin hanjabaadaasi oo uu ahaa nin Alle aaminsan hadana waxa ay xustay in waqtigiisa oo dhamaaday.
Waxaan ahay Fanaanad aabaheygana waxa uu ahaa Abwaan wax curiya balse isaga oo kale ma noqonayo waayo waxbuu curinayay isaga ayaana ka dhexlay Fanka waana sii wadi doonaa ayey hadalkeeda raacisay Ayaan Warsame Shire Cawaale.
Fanaanada Ayaan oo hada ku sugan magaalada Kampala ee wadanka Uganda ayaa heesa ay qaaday waxaa ka mid ah Heeska laga dabadhacay ee Kampalla adigaa I baday